वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : विदेश बसेका माओवादीहरुसंग
तत्कालका लागि पहिलो पाटोनै सत्य हो भन्ने मान्यतामा कुरा अगाडि बढाऔं।
विदेश बसेकाहरु भनेर तोकेरै भन्नुको कारण पनि स्पष्ट पारिहालौं। नेपालमा अझैपनि साम्यवादी ‘रामराज्य’ प्रतिको आकर्षण ज्यूँदै छ। विशेष गरी शिक्षाको अवसर नपाएको अथवा केहि समय यताको विश्व राजनीतिको बारेमा कम जानकारी भएको एउटा ठूलो हिस्सा अझैपनि माओवादीहरुले भनेजस्तो कथित सर्वहारा अधिनायकवादनै सबै कुराको रामवाण हो भन्ने कुरामा विश्वाश राख्छ। उनीहरुलाई तुरुन्तै ब्युँझाउन गाह्रो हुनसक्छ। तर लोकतन्त्रले संस्थागत हुन पायो र देशको आर्थिक विकास हुन थाल्यो भने उनीहरुको पनि मोहभंग हुन थाल्नेछ र माओवादीको वास्तविक पतन शुरु हुनेछ।
माओवादीले कल्पना गरेको उनीहरुको अधिनायकवादी शाशन भनेको कस्तो हो? उनीहरु आफ्नो आदर्शको रुपमा सधैं स्टालिनकालीन तत्कालीन सोभियत संघ र माओकालीन चीनलाई उभ्याउँछन्। यस हिसाबले हेर्दा अहिलेको ‘पागल किम’ को उत्तर कोरीयापनि उनीहरुको आदर्श हो। बाँकी सबै उनीहरुको नजरमा कथित ‘संसोधनवादी’ हुन्। स्टालीनले सर्वहारावर्गको शाशनको नाममा तिनै सर्वहारावर्गमध्येका करोडौंको कत्लेआम गरेका थिए र सोभियत जनतालाई कडा दमनमा राखेका थिए। सोभियत शाशन त्यसपछि पनि कहिल्यै उदार र जनप्रिय भएन। यदि जनप्रिय हुन्थ्यो भने गत शताब्दीको अन्त्यमा त्यति ठूलो क्रान्ति र उथलपुथलबाट सोभियत संघ भित्रका राज्यहरु गुज्रनु पर्ने थिएन र सोभियत संघको अवसान हुने थिएन।
माओकालीन चीनको कथा पनि उस्तै हो। अझ माओवादीहरुको विश्लेषणमा वर्तमान नेपालको राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक अवश्था माओले कब्जा गर्नुअघिको चीनसंग बढी मिल्न आउँछ, त्यसैले उनीहरु माओको बाटो पछ्याउन चाहन्छन्। (एक प्रसंग, उनीहरुले ‘माओवाद’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन् जबकि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्वयंले भने कहिल्यै यो शब्द प्रयोग गरेको छैन, उनीहरु ‘माओ विचारधारा’ भन्ने शब्दावलीनै प्रयोग गर्छन्।)
माओको मृत्यु एक अर्थमा चीनको लागि वरदान थियो। यसपछि चीनले ‘बन्द कोठरी’ बाट फुत्केर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो सकृय भूमिका देखाउन पायो। उदारीकरणका कारण चीनमा विश्व पूँजीवादको लगानी भित्रियो र यसकै कारण द्रुत आर्थिक विकास भयो। अब चीन कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने त हामीले देखेकै छौं। यद्यपि, राजनीतिक रुपमा चीन अझै कठोर एकदलीय नियन्त्रणमानै छ। बिस्तारै राजनीतिक सुधार भएन र स्थिति यहि रहिरह्यो भने भविष्यमा अत्यन्त ठूलो राजनीतिक विद्रोह हुने निश्चित छ चीनमा।
अब वर्तमान विश्वको ‘साम्यवादी मक्का’ उत्तर कोरीयातिर लागौं, जहाँ क्रान्तिका नाममा नयाँ ‘लाल राजतन्त्र’ शुरु गरिएको छ र पूरै देशलाई जर्ज ओरवेलले चित्रण गरेजस्तो ‘एनिमल फार्म’ बनाइएको छ। क्रान्तिको रक्षा गर्ने नाममा जनता सबैलाई ‘भेडा-बाख्रा’ बनाइने यो कस्तो क्रान्ति हो?! हरेक बच्चाले किम परिवारको स्तूति गान गर्दै हुर्कनु पर्ने यो कस्तो प्रगतिशीलता हो? के साम्यवादीहरुले भन्ने गरेको इतिहासको सबैभन्दा विकसित र उत्कृष्ट अवस्था यहि हो?!
अर्को कुरा, संविधानसभाको चुनावमा जाने भइसकेपछि पनि ‘धोका भयो भने फेरि जनविद्रोह गर्ने’ धम्की त ताजै छ। यो धम्की चुनाव सकिएको भोलिपल्टबाट देशलाई फेरि अस्थिर पार्न अहिल्यैबाट तयार पारिएको बहाना हो भन्न सकिने धेरै आधारहरु छन्।
निश्चयपनि, राज्यप्रणाली चाहे अमेरिकाको जस्तो होस् चाहे बेलायतको जस्तो; खुल्ला र प्रतिष्पर्धात्मक राज्य ब्यबष्थामा बहुमतप्राप्त पक्षले निश्चित समयसम्मको लागी राज्यसञ्चालनको अधिकार पाउँछ। यो भन्दा अर्को बाटो पनि छैन। तर बहुमत ल्याउने पक्ष तानाशाह नहोस् भनेर शक्तिसन्तुलनका बिभिन्न उपायहरु पनि अबलम्बन गरिएका हुन्छन्।
विदेश बसाइले मान्छेको राजनीतिक चेतनास्तरलाई अलिक फराकिलो पार्छ/पार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
निर्दलीय भएपनि, एकदलीय भए पनि तानाशाही भनेको तानाशाहीनै हो। अलिकति मात्रै पनि राजनीतिक चेतना र नेपालको माया भएको मान्छेले कुनैपनि तानाशाहीको समर्थन गर्नुभनेको आफैंलाई, समाजलाई र देशलाई धोका दिनु हो।
Posted by Basanta at 10:16 PM
Nawresh May 3, 2010 at 12:10 AM
Good Writing!!! Nice points to ponder...
रन्जन कुमार दाहाल May 3, 2010 at 12:13 AM
बसन्त जी, राम्रो छ तपाईको विचार !
Ajmat Rehaan Ali May 3, 2010 at 5:07 AM
I really loved your article especially the way you have portrayed your thoughts.
बसन्त दाई हजूर को हरेक लेखमा शब्द सिमानाको बेजोड़ दम भेटिंछ,बस्ताबिकताको धरातलमाँ अडेर निर्धारित गंतब्यको पहिचान संगै गहकिला शाब्दिकलहरहरू छोड़ीदिनु हुन्छ तेसैले त पढ्न निक्कै मज्जा लाग्छ, धन्यवाद दाई
birendra May 3, 2010 at 11:25 AM
Basnta sir namaskar,
tapaiko bishleshan bahut ramro lagyo. Nepali newspapaer ma yesta kuraharu daily stambha banai preshan garna pae kati ramro hunthyo hola hae?
Basanta May 14, 2010 at 2:03 PM
mb haru ko real rup6tapai ko lakh ma